Ady & Fifandirana · Jolay, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Ady & Fifandirana · Jolay, 2008
Tantara mikasika ny Ady & Fifandirana tamin'ny Jolay, 2008
Libanona 31 Jolay 2008
Libanona: Mamelona indray ny fikambanana jiosy
Libanona 27 Jolay 2008
“Manohana ara-bola sy manavao ny sinagoga, lehibe indrindra any amin'ny tontolo Arabo, Magen Abrahama afovoan-tanànan'ny renivohitra Libaney ny zanaka ampielezana Libaney. Antenaina ho vita mialoha ny faran'ity taona ity na mialoha ny taona 2009 ny fanavaozana,” hoy ny tatitry The Lebanese Inner Circle.[Kodiarana Libaney]
Rosia: Toby miaramila rosiana any Venezoalà?
Amerika Latina 23 Jolay 2008
Mpikambana ao amin'ny fiarahamonina LJ Politika v Rossii (RUS) no nitsapa ny hevitry ny mpamaky raha tokony araraotin'i Russia ny fanomezan-tanan'ny filoha Venezoelana Hugo Chavez ny hanorenana toby miaramila (Rosiana) any Venezoelà. Tena lasa lavitra tokoa, fa nanaiky ny hevitra ny 70%n'ny nanambara ny heviny rehefa nojerena ny valiny.
Arimenia: Baolina politika
Armenia 12 Jolay 2008
Unzipped no milaza ny heviny avy amin'ny tenin'ny filoha vaovaon”i Arimenia navoakan'ny Wall Street Journal ahitana ny fanantenan'i Serge Sargsyan fa mety hiteraka fifandraisana eo amin'ny tany roa tonta ny fihaonan'i Arimenia sy Torikia amin'ny baolina fandaka hifanintsanana ho amin'nyfiadiana ny amboara erantany amin'ny volana septambra ho avy izao. Mikatona...
Iran: Tsy mandainga ny sary
Iràna 12 Jolay 2008
Nasongadin'i Kamnagir, mpamaham-bolongana Iraniana, fa sary nalaina nandritra ny fanandramana tahaka ity 2 taona lasa izay ny sary navoaka lazaina ho fanandramana fandefasana balafomanga notontosaina vao teo iny. Raha te-hamaky bebe kokoa ianao dia vakio ao amin'nyView From Iran (fijery avy aty iran) sy New Yrok Times blog.
Israely 09 Jolay 2008
Afganistana 09 Jolay 2008
Shina: Sarkozy ve no fototry ny olam-pifandraisan'i Shina sy Frantsa?
Frantsa 08 Jolay 2008
'Fahafahana , Fitoviana, Firahalahiana, mba teny mambabo fo loatra lahy izany! Raha izany ary nahoana no mbola misy lonilony eo amin’i Shina sy Frantsa?'